ဗာတီကန် နန်းတော် ဘဏ္ဍာထိန်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် တရားရင်ဆိုင်ရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဗာတီကန် နန်းတော် ဘဏ္ဍာထိန်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် တရားရင်ဆိုင်ရ
Australian Cardinal George Pell looks on as he makesastatement at the Holy See Press Office, Vatican city on June 29, 2017 after being charged with historical child sex offences inacase that has rocked the church. Cardinal Pell says on June 29 that he will return to Australia to face sex abuse charges. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLIALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images
ဗာတီကန် နန်းတော် ဘဏ္ဍာထိန်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် တရားရင်ဆိုင်ရ
ဗာတီကန် ဘဏ္ဍာထိန်း ဖြစ်သူ ကာဒီနယ် ဂျော့ဂ်ျပဲလ်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့် တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အဲဒီလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ရသူတွေထဲမှာ ကာဒီနယ် ဂျော့ဂ်ျပဲလ်ဟာ ဝါအရင့်ဆုံး ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး တဦးဖြစ်ပြီး မနှစ်တုန်းက သြစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့က ဆင့်ခေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဒီနယ် ပဲလ်ကတော့ စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ စီးပွားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ကာဒီနယ် ဂျော့ဂ်ျပဲလ်ဟာ တာဝန် ဝတ္တရားတွေကနေ ခေတ္တခဏ ခွင့်ယူပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်း တရားရုံးကို လာရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဒီနယ် ဂျော့ဂ်ျပဲလ်ဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်ရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပေးတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗာတီကနျ နနျးတျော ဘဏ်ဍာထိနျး လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှပျစှဲခကျြကွောငျ့ တရားရငျဆိုငျရ
ဗာတီကနျ ဘဏ်ဍာထိနျး ဖွဈသူ ကာဒီနယျ ဂြော့ဂျြပဲလျဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောငျ့ယှကျမှု စှပျစှဲခကျြတှကွေောငျ့ တရားရငျဆိုငျနရေပါတယျ။
အဲဒီလို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှပျစှဲခကျြတှကေို ရငျဆိုငျရသူတှထေဲမှာ ကာဒီနယျ ဂြော့ဂျြပဲလျဟာ ဝါအရငျ့ဆုံး ကကျသလဈ ဘုနျးတျောကွီး တဦးဖွဈပွီး မနှဈတုနျးက သွစတွေးလရြဲတပျဖှဲ့က ဆငျ့ချေါခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကာဒီနယျ ပဲလျကတော့ စှပျစှဲခကျြအားလုံးကို ငွငျးဆိုထားပါတယျ။
ပုပျရဟနျးမငျးကွီးရဲ့ စီးပှားရေးဝနျကွီးဖွဈသူ ကာဒီနယျ ဂြော့ဂျြပဲလျဟာ တာဝနျ ဝတ်တရားတှကေနေ ခတ်ေတခဏ ခှငျ့ယူပွီး သွစတွေးလနြိုငျငံ၊ မဲလျဘုနျး တရားရုံးကို လာရောကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကာဒီနယျ ဂြော့ဂျြပဲလျဟာ ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ဖရနျစဈရဲ့ ထိပျတနျးအကွံပေးတဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
Previous articleရန်ကုန် လေဆိပ်မှာ အကောက်ခွန်မဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိ
Next articleအသက် ၁၀၀ သတို့သားနဲ့ အသက် ၉၆ နှစ် သတို့သမီးတို့ မင်္ဂလာပွဲ လူတွေ အံ့အားသင့်